Fijoroana vavao ho an'ny mpanjifa
Torohevitra 4 azo ampiharina amin'ny fividianana Mini Excavator
Ny mpitrandraka kely na kely dia fitaovana tsy miovaova amin'ny tranokala rehetra. Afaka miditra amin'ny faritra tsy azon'ny masinina lehibe kokoa izy ireo. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny lahasa isan-karazany. Mora kokoa ny misintona azy ireo noho ny alternatives habe feno. Ary ny lalan-kalesiny sy lig ...
Mini Excavator - Aza avela hanadino anao ny habeny!
Ireo mpitrandraka kely fantatra ihany koa amin'ny hoe excavator kely, dia faritana amin'ny alàlan'ny fandavahana kely hydraulic izay omena lanja indrindra amin'ny fahafahany mihetsika sy miasa ao anatin'ny faritra tery na tery izay tsy vitan'ny mpihady lehibe kokoa. Wit ...
Ahoana ny fomba hisafidiananao ny excavator mety？
Excavator no lasa milina fanorenan-danja indrindra amin'ny fananganana injeniera. Na dia mety ho asa mandany fotoana aza ny fisafidianana ny fitaovana mety amin'ny tetikasa fandavaka, indrindra fa tena zava-dehibe ny fanaovana safidy tsara. Na dia indray mandeha aza dia nanapa-kevitra ny amin'ny usin ...
Fampiharana Mini Excavator
Mini excavator dia milina azo ampiasaina amin'ny fampiasana isan-karazany, toy ny fitrandrahana, fandrodanana, ary fananganana tany. Misy amin'izy ireo samy hafa ny habeny sy ny heriny, miankina amin'ny asa tokony hatao ary tena ilaina izy ireo rehefa manao asa fiompiana. ...
Amphibious Excavator no mpanampy lehibe anao miasa amin'ny tany malemy sy rano marivo!
BONOVO Machinary & Equipment Co., Ltd. Mpanamboatra manam-pahaizana manokana momba ny vokatra befahatany MOMBA ANAY ...
Ahoana ny fisafidianana siny tonga lafatra
Nandritra ny taona maro lasa iray amin'ny mpitarika tsena amin'ny famokarana indostrian'ny milina fananganana, ny BONOVO dia matetika no nanontanian'ny mpanjifa samihafa, na iza na iza mpampiasa farany, mpivarotra na mpiara-miasa OEM, BONOVO dia afaka manome toky foana fa ny vokatra rehetra dia ...
Fankalazana amin'ny Andron'ny Vehivavy
Ny andron'ny vehivavy amin'ny 2021 dia mitoetra amin'ny 8 martsa, alatsinainy. Ny faha-25 amin'ny volana volana voalohany amin'ny Taona Xin Chou (Taona omby). Iraisam-pirenena, ny 8 martsa 1911 no andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy miasa voalohany. Nanomboka nankalaza ny Andro "8 martsa" i Shina tamin'ny 1922. Noho izany, ...
Ahoana no fandrefesako ny refy ampiakariniko?
Ny mpividy sasany toa ny mpampiasa farany, ny mpivarotra ary ny mpaninjara dia mety tsy matihanina amin'ny siny fihadiana. Tokony hanana fanontaniana toy izany izy ireo toy ny "Ahoana ny fomba hijerena ny kalitaon'ny siny excavator?", "Inona no zava-dehibe indrindra ho an'ny siny excavator?", "Iza ny siny mifanentana amin'ny Digger / Exc ...
Torohevitra mahomby amin'ny fiainana ambanin-javatra lava
Fanaraha-maso marobe amin'ny fikojakojana sy ny fandidiana no hiteraka fiakanjanana tafahoatra amin'ny faritra ambanin'ny kalesy. Ary satria ny ambanin-tsarimihetsika dia mety ho tompon'andraikitra hatramin'ny 50 isan-jaton'ny vidin'ny fikojakojana ny masinina, zava-dehibe kokoa ny fitazonana sy ny fampandehanana ny milina mpikotrana. Amin'ny alàlan'ny fanarahana ...
Ireto toro-hevitra enina ambanin'ny karatra 6 ireto dia hisoroka ny fotoana fihenan'ny excavator lafo
Ny fikojakojana ny fitaovana mavesatra be zahana, toy ny mpikaroka crawler, dia misy singa mihetsiketsika marobe tokony hotehirizina hiasa tsara. Raha tsy zahana sy voatazona matetika ny undercarriage dia mety hitarika any amin'ny downti ...
Ahoana ny fomba fampiasana mini excavator?
Mini excavator dia noheverin'ny mpandraharaha fitaovana mavesatra am-polony taona vitsivitsy lasa izay rehefa nampahafantarina azy ireo voalohany, saingy nahazo ny fanajana ny mpikirakira ny asa fanamboarana sy ny matihanina amin'ny asa miaraka amin'ny fanamorana ny asany, dian-tongotra kely, mora vidy, ...
Fankasitrahana avy amin'ny ekipa Bonovo
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-23
Hatramin'ny nananganana an'i BONOVO dia nitombo haingana be isan-taona, ary nanatsara ny tranon'ny birao isaky ny 2 taona izahay. Ary koa ny fahaizan'ny orinasa mpamokatra dia nitombo avo roa heny isan-taona. Nino mafy ny ekipanay fa ny BONOVO dia tsy afaka mitombo haingana sy maharitra raha tsy misy ny fanohanan'ny ...